amin'ny Tegan Jones
Last nohavaozina: Sep. 17 2019 | 2 min namaky
No mahazo izany dingana eo amin'ny fiainana, raha mieritreritra ianao ny furry, purring namany hitandrina anao orinasa? Aza menatra; hanaiky izany. Saka dia mahafinaritra, ary aho handeha lavitra ny milaza fa ao amin'ny toe-javatra maro, ry zareo dia tsara lavitra noho ny sipa. Antoka, ry zareo tsy afaka hanatanteraka ny zavatra ara-batana (izany antoka fa tsy izay holazaina Date My Pet), fa izany no ny aterineto, ny teknolojia maoderina sy ny karatra dia ho an'ny. Ny zavatra atao dia ny manome tia, orinasa, ary be dia be ny rehetra Ihomehezany. Afaka Hatsipiny ny 'saka vehivavy adala' henatra manodidina rehetra te, fa maro ireo antony hilariously generalized mba hifidy ny saka ny sipa.
1. Mahalana izy ireo adino ny Mark
sary avy orphum CC
Fantatrareo fa miresaka aho momba ny kabine eto, vehivavy. Saka amin'ny ankapobeny mampino marina tsara rehefa mikendry.
2. Ataon'izy ireo izay hijanonana Tena Tsara Groomed
sary avy Lioka Jones CC
Saka tena miahy ny tarehiny sy hitandrina ny tenany mitady tsara. Antoka, ny sasany amin'ireo volo lava mahavelona mila brushing fanampiny, fa, fara fahakeliny, ireo tia azy.
3. Low ry zareo fikojakojana
sary avy oskay CC
Saka rehetra atao dia matory, sakafo, pats sy playtime. Dia tsy voatery hiady amin'ny ratsy moods, pihetseham-po na ny tsy firaharahiana Tuning ho TurtleMan, Gana Fiankohonana na na inona na inona hafa ry zalahy toa crap tia mijery.
4. Ampionòny ny Anao izy ireo rehefa marary ianao
sary avy contraption CC
Saka manana heviny fahenina rehefa aretina, ary matetika indrindra fa nampionona sy be fitiavana, rehefa ny tompon-javatra marary. Juxtapose izany tamin'ny lehilahy iray aminareo no mamily mazava ka tsy voan'ny gripa Man ary afaka ny antony saka no safidy ambony.
5. Izy ireo ianao Ataovy mafana
sary avy Alisha Vargas CC
Ny saka tsy hitsara na hisintona lavitra anao noho ny mahatsiravina icicles fa hoe ny rantsan-tongotra. Faly ry zareo snuggle ka hiaro anao sy ny Glacier tongotra mafana.
6. Tsy amin'ny rafozana
sary avy admiller CC
Tsy adala reny-in-lalàna dia miampy goavana ao amin'ny boky.
7. Pats, ary ho Pats
sary avy Emiliàn Robert Vicol CC
Tsy manantena na inona na inona intsony avy amin'ny fanorana. Fantatrareo ny zavatra tiako holazaina amin'ny hoe, tompokovavy.
8. Tsarao Tsy hihinananareo fahazarana
sary avy Alex Goodey CC
Ny fanaovana ny 1am Sakafo maivana avy amin'ny voanjo dibera, sokola poti-ary ny sotro? Ny saka dia ho any amin'ny izay. Tsy hitsara tarehiny na ny fanaovana fanatanjahan-tena unsubtle hamantatra izany memberships eto.
9. No Whiskers ao amin'ny hilentika
sary avy Ken Print CC
Eny, izany no nitranga Pun. Tsisy fisaorana.
10. Manana-pitsaboana Access To ny Records
sary avy anja_johnson CC
Creepy tianao hohanina, ary tanteraka aho fa aina amin'ny. Fa tsy maintsy miaiky fa mampahery ny mahalala ny misy olana tsy mahagaga VD amin'ny furry feline namana.